Diabe hametraka minisitra hoe? | GAZETY_ADALADALA
Diabe hametraka minisitra hoe?
Posted on 16/02/2009 by gazetyavylavitra
Araka ny fotoana nifanomezan’ny teo amin’ny Kianja 13 mai dia niroso tamin’ny ho fametrahana ireo minisitra izy ireo.
Tsy hitako ary tsy fantatro izay zava-nisy talohan’ny nahatongavako teo anoloan’ny RM1 (toby miaramila eo Andohan’Analakely).
Ny hitako tamin’ny fotoana nahatongavako dia ny olona marobe nanao antokony roa: ny iray tery Ambohijatovo manoloana ny Tsangambaton’ny 29 Mars,
ireo teny Ambohijatovo akaikin'ny tsangambato
ary ny faharoa kosa dia ety ambany mifanandrify indrindra amin’ny Bibliotheque Municipale
ireo tety anoloan'ny Bibliotheque Minicipale
ireo mpiandry teo an-daharana
mipetraka ny eo anoloana ary mijoro eo anoloany eo ny mpiandry vitsivitsy. Tsy lavitra teo ny sono mobile tsy mitsahatra mandefa hirahira sy fanentanana.
Fotoana fohy taorian’izay nahatongavako teo izay (3 ora sy 5 mn / 15h 05) dia indreny nidina avy tany Ambohijatovo tany ireo solontenan’ny HAT (Haute Autorité de la Transition).
Saika hifampiresaka tamin’ireo tomponandraikitra isaky ny ministera (mponina sy fanatanjahantena) noheverina fa hapetraka ny androtry ny anio. Tsy nahazo fahafaham-po izy ireo satria trano sy vavahady nihidy no novantaniny. Tsy nisy noho izany ny resaka na zavatra azo natao.
Nifandrombahan’ireo mpanao gazety tonga teny (Malagasy sy vahiny)
nifanotofan'ny mpanao gazety ireo solontena
nanontaniana ny fandehany tany izy ireo. Nambarany tamin’izany fa tsy nisy azo natao aloha fa hiverina hiaraka amin’ny vadintany ry zareo amin’ny manaraka. Ny antony naroso momba izay fanapahan-kevitra izay dia ny tsy hidirana amin’ny toerana mihidy raha tsy misy vavolombelona mahita momba izay entana sisa tavela ao anatin’ireny tranom-panjakana ireny, hisorohana ny mety hilazana azy ireo ho nangalatra ny entana tsy hita, na mety tsy ho hita ao anatin’izy ireny.
Vita ny anjaran’ny mpanao gazety dia niroso kosa indray hanao tatitra tamin’ny vahoaka indray
hanao tatitra amin'ireo mpanara-dia indray
. Raha vao nandre ireto vahoaka fa hoe tsy nahomby ny dia, dia maro no tsy faly sy nihogahoga (miala tsiny aho raha milaza fa olona hafahafa daholo ireto hitako teo amin’ny lohalaharana nandritra ity andro androany ity). Efa nisy moa ny (barrage) rindrin’ny miaramila efa vonona teo alohany teo.
rindrina Miaramila (barrage) teo akaikin'ny Super Music sy ny BNI
Ireto vahoaka (na ireto olona voalazako etsy aloha) dia tsy nety hihaino intsony ny tatitra nataon’i Monja Roindefo sy ny Jeneraly Organès.
Monja Roindefo mandresy lahatra ny mpanara-dia azy
Rehefa nifandresy lahatra ela teo ny solontena nandeha tany amin’ny ministera sy ireo ‘tsy mety hihaino’, dia hita fa tsy naharesy lahatra ireto farany izy ireo. Niafara tamin’ny fitoratorahana ny sono mobile sy ireo tao anatiny izany. Nahatsiaro ho diso fanantenana ve ireo olona ireo sa efa zavatra hafa mihitsy no noeritreretina, saingy diso ny teti-panorona? Nandeha ny toraka voatabia sy ny sisa. Nisy nanozongozeona ny fiara, ary dia nivilavila ampitoerana teo ilay fiara. Nisy nilaza aza moa fa hoe lasan’ireto mpanararaotra ireto ny baffle iray tamin’io fiara io, ary vetivety dia nanjavona tsy hita tany anaty vahoaka tany (tsy hitako maso io fa resaka heno). Hany herin’ireo mpitarika dia niteny tamin’ireto ‘olona tsy resy lahatra’ ireto fa raha tiany ny hamakivaky ireo mpitandro filaminana sy handeha ho an’ny amin’ny ministera dia mandehana izay sahy. Fa izy ireo kosa mbola hitady sy hiandry huissier (vadintany) vao afaka miroso amin’izany indray. Rehefa izany dia lasa nilefa namonjy ny tany ambadiky ny kianjan’ny 13 mai ilay fiara. Ary dia niara-tonga tamin’i Andry Rajoelina tao an-toerana. Niezaka nihazakazaka nanenjika tato aoriana ireto tsy faly.
taty amin'ny pavillons mpanao elobe no nirifatra ilay fiara
Tsy haiko izay niafarany tany satria izahay sy ireo mpanao gazety namana rehetra dia tsy niala lavitra fa teo anelanelan’ireto andry miaramila anankiroa foana nandritra ny fotoana nisehoan’ireo rehetra ireo (ho fiarovana ny aina).
ireo andry miaramila (barrage) nanodidina anay
Nanomboka ny toratoraka vato nataon’ireto andian’olona lohalaharana ireto nankany amin’ireo mpitandro filaminana.
ho an'izay tsy mijery eto dia ny loha no mitaty
Niezaka ny tsy nanao na inona na inona ireto farany. Nefa rehefa nanositosika ilay vy be fanariam-pako ireto andian’oloana ireto ary niha nanatona ny toerana nisy ireto mpitandro filaminana, no sady mbola nanohy hatrany ny tora-bato ihany, dia tsy maintsy niaro ny toerana nisy azy amin’izay ireto mpitandro filaminana avy amin’ny EMMONAT ireto, ka nandefa ny baomba mandatsa-dranomaso voalohany tokony ho tany amin’ny manodidina ny tamin’ny efatra ora tany ho any.
fanaparitahana tamin'ny alalan'ny baomba mandatsa-dranomaso voalohany
Samy nandefa izany daholo ireo andry miaramila roa avy aty Ambohijatovo sy ny teo anoloan’ny BNI Analakely. Miroso hatrany koa izy ireo mba hanemorana ny olona tsy hanatona ny toby miaramila. Marihana fa feno mpivarotra volamena koa manodidina io Banky BNI io, ary ety akaikin’ny Bibliotheque Municipale kosa dia misy ireo mpivarotra electromenagers. Tonga hatrany anaty elakelantrano manodidina sy ireto tohatohabato manodidina ny baomba mandatsa-dranomaso nalefa mba hanaparitahana ny olona.
Mbola olona marobe mifanitsa-kitro no tsinjo raha mitodika mankany amin’ny gara ianao, avy ety amin’ny BNI Andohan’Analakely. Olona maro be sahy sy vonona amin’izay maha resy lahatra azy. Be ko anefa ireo mpanararaotra no nandeha niditra tany anaty pavillons tany. Ary narahan’ireto mpitandro filaminana mandeha miadana avy ety ivelan’ny arabe no sady nasainy niala ny toerana sy ny lalankely mamakivaky ny pavillons .
EMMONAT miaro ireo pavillons
Ny zavatra mampalahelo dia ny toe-tsain’ireto andian’olona teo amin’ny lohalaharana ireto. Ny fiara izay tavela teny amin’ny sisiny teny dia nezahan’izy ireny nokitihana daholo. Ary ity fiara amin’ny sary ity dia nendahana ny retroviseur
fiara saiky voaroba
ary natsipy tany amin’ny mpitandro filaminana ka raha tsy nalefa ny baomba mandatsa-dranomaso, dia angamba efa tsy nisy noraisina, na may izy io. Nisy mihitsy aza ireo izay tonga hatramin’ny mody manao mitondra ny namany maratra,hono, nefa rehefa tafiditra ao anaty fiara dia ny manendaka izay ao anatiny sy izay azo esorina no ataony. Toy izay nahazo ity lehilahy iray nitomany niantso an-telephone ny namany androany teny Andravoahangy.
Tokony ho tamin’ny efatra sy sasany mahery kely (16h 38) dia nirohotra ireto andian’olona ireto nanatona ny toeran’ny mpitandro filaminana no sady mitoraka sy miantsy .
sady mitoraka no manatona hatrany ireto olona ireto
Ny mahatsikaiky sy mahasorena ihany koa dia ny mahita azy ireo tondroina amin’ny basy mipoaka (balle blanc)
ireo vodibala notsimponiko teny an'arabe avy ato aorian'ny mpitandro filaminana
, ka rehefa mipoaka ny basy dia mody mitsirara ry vendrana, avy eo dia mifoha indray ary mikakakàka mihomehy sy mandrangitra ny miaramila.
Rehefa ela nifanatrehana teo ny roa tonta, ary nanoloana ny fahasahisahian’ireto olona ireto, dia nihemotra namonjy toby ireto miaramila nony farany. Isaorana azy ireo ny tsy fampiasany balle réelle hatramin’ny farany. Naleony niala sy nisintaka toy izay handatsa-drà. Fa raha tsy izany dia angamba ho zava-doza no hita. Nentin’izy ireo niditra ny toby daholo ireo mpaka sary sy mpanao gazety nanaraka ny consigne nomeny hoe ‘aza mandeha eo alohanay ianareo fa aty aoriana hatrany’. Nahita izany ireto andian’olona ireto dia toa nihevitra fa resy ny miaramila, ary dia niha nahazo aina. Tonga hatreo ambavahadin’ny toby saiky hanao amboletra izy ireo. Fahasahiana re izany! Saiky tsy voatosik’ireo miaramila mihitsy ilay vavahady mba hanidiana azy.
ireo andian'olona any ivelany manosika hamoha, ny ato anaty toby manosika hanidy
Voahidy ihany moa ilay vavahady be nony farany. Ny tora-bato avy any ivelany kosa dia nanimba fitaratra fiara vitsy tao anaty toby. Fa izay tena nahitako ny fahasahian’ireto olona dia ny fanatonany ny toby sy nandoroany ny cypres mamefy izany toby izany. Soa ihany fa hita haingana ny afo ka maty ara-potoana.
ireo tafika avy namono ny afo tamin'ny fefin'ny toby
Nentina miaramila iray niakatra tany amin’ny rihana voalohany aho sy ilay mpaka sarin’ny Africa_International. Ary afaka nahita tsara izay niseho nanodidina ny toby. Nitodika taty amin’ilay tsangambato momba ny ady atao amin’ny SIDA io no nisy anay. Teo no nahitanay fa misy olona vitsivitsy avy ao anatin’ireto andian’olona ireto mampiasa pilotra
ilay tsangambato niafenan'ireto mpitoraka pilotra. Avy amin'ny ilany havia amin'ny sary izy ireo no mivoaka rehefa hitoraka
, ary tena mahitsy toraka sy mafy tokoa. Tsy azo natao mihitsy ny misehoseho be mandritry ny segondra maromaro eo amin’ilay varavarankely. Rehefa misy mandefa vato dia tsy maintsy misy miteny haingana izay mahita ka manao hoe ‘vato’, dia miara-miafina ambadiky ny andrin-trano daholo, na miondrika ambany. Feno vato sy vakim-pitaratra ny tao ambony rihana. Zavatra nampalahelo ireto mpitandro filaminana ihany koa ny fahitana fa dia miandahy miambavy ireto olona manao INTIFADA GASY [fanafihana amin’ny alalan’ny tora-bato toy ny an’ny Palestiniana] ireto, ary ny salan-taona dia tena ankizy no azo ilazana azy. Satria moa ny fakantsary mba azoko nampiasaina hatreto dia tsy mahataka-davitra, ka dia ilay zalahy mpaka sary avy amin’ny Africa International no naka sary ireo mpanipy pilotra. Ary dia mazava be tokoa. Nifanome laharana finday moa izy sy ireo manamboninahitra tao amin’ny toby fa hanolo-tanana amin’ny fanomezana sary ny mpitandro filaminana izy. Indrindra fa ireo mpandefa pilotra. [ny aza voany kosa aloha an!]
Ankoatra ireo dia nisy Scooter iray nitondra olona roa nanitsy tamin’ny arabe mamakivakly ny pavillons iny. Nisomaritaka ireo andian’olona nankeny ary nihevitra aho fa norotahana ilay Scooter. Ireo miaramila izay tsara toerana nahita tsara ny niseho anefa no mitantara fa olona mpizara vola ho an-dry zalahy ilay nandeha scooter, fa tsy olona endahana akory. Minitra vitsy taorian’izay dia nilamina iny.
Nisy koa lehilahy iray tery an-joron’ny lalankely miditra mankany amin’ny Bibliotheque Municipale, toa naka sary, ka tsy nahafaly ireto andian’olona ireto, ary nitangoronan’izy ireo sy notaritiny lavidavitra nankeny akaikin’ny Paositra teny. Tsy hainay izay niafarany.
Niresaka moa ireto mpitandro filaminana (izy samy izy) fa dia ho henjana ny fanaovana patrouille anio alina.
Tsy tafavoaka tao an-toby, na ny marina kokoa dia tsy nanapa-kevitra hivoaka tao izahay mirahalahy mpaka sary, raha tsy efa azonay antoka fa azo natao ny nivoaka. Manondro amin’ny enina ora hariva ny famantaran’ora. Ireo mpanao gazety vahiny kosa moa dia efa ela talohanay no nivoaka sy nandehandeha hatreny akaikin’ny BNI teny.
Vaovao io hariva io
Milaza ny hivory (na tsy hatory mandrapaharainan’ny andro aza) ny HAT hitady izay stratejia hakàna ny ministera rehetra, ary nanome fotoana ny mpanara-dia azy indray eo ankianja rahampitso Talata.
Nasehon’ny TV Plus androany hariva teo ny sarin’ilay Olom-boafidy ao amin’ny Firaisana faha 4 nanakarana andian-jatovo sy nizara vola tao amin’ny Palais des Sports raha iny izy sy ireo mpiara-dia aminy miedinedina teny Anosy iny indrindra, ary nitarika iretsy olona hanampy ny miaramila teny Anosy hiambina ny Ministera.
Henjana be koa izao ny geurre de la communication an!
Hatramin’ny enina mahery dia mbola nandrenesana poa-basy hatrany Behoririka tany
MISAOTRA MANOKANA NY EMMONAT sy ny MPITANDRO FILAMINANA REHETRA IZAY NIARO MANOKANA NY MARO TAMINAY, sy INDRINDRA KOA TSY NAMPIASA BALA TENA IZY.
MANAMELOKA KOSA NY FIHETSIKA FENO FIHANTSIANA HITAKO SY NATREHIKO ANDROANY AVY AMIN’IREO ANDIAN’OLONA HAFAHAFA TEO AMIN’NY LOHAN’NY LAHARANA ANDROANY
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: 13 mai, Andohan'Analakely, Andry RAJOELINA, émeutes, démocraties, demokrasia, mouvement populaire, riots, RM1 |
« Nisy maty koa tany Toliary CD ‘ilay sabotsy mihoson-drà’ »
ikalamako, on 17/02/2009 at 1:32 said:
aie aie aie – teniko matetika hatrany am-boalohany ny hoe rehefa anaty cafouillage dia tsy hay intsony hoe iza no manao inona ho an’iza, iza no manakarama an’iza hanao inona, sns. Mahavalalanina sy mahalasa saina.
lezama sahala, on 17/02/2009 at 5:56 said:
aiza ary izany dia ahoana ihany e! inona indray ny hevitra manaraka fa ahoana e dia raha hitohy izany rehetra izany dia ahoana indray ny avy eo de hiasa ihany ve ny ministera rahampitso . fa moa tsy toa izany koa moa ny 2002 dia tonga @ ilay fitennena hoe ny atao ihany no miverina?
sipagasy, on 17/02/2009 at 11:50 said:
Mitandrema ihany hoaaa aza dia manakaiky behhh fa mampatahotra e!!!!!
Children of Rastaman, on 17/02/2009 at 12:40 said:
Thanks for all thes pictures.
You’re The best « avy Lavitra ».
Rastaman Positive Vibration.
Antananarivo bloggers actively reporting on the political crisis, on 20/02/2009 at 11:39 said:
[…] Diabe hametraka minisitra hoe? […]
Rising Voices » FOKO: Ushahidi Comes To Madagascar, on 21/02/2009 at 9:17 said:
[…] Diabe hametraka minisitra hoe? (march to take over the ministries) […]